galmudugnews.com » Madaxweynaha cusub ee Galmudug oo golahiisa Wasiirada Magacaabaya – Yaa ka mida ?
Home » WARARKA » Madaxweynaha cusub ee Galmudug oo golahiisa Wasiirada Magacaabaya – Yaa ka mida ? Madaxweynaha cusub ee Galmudug oo golahiisa Wasiirada Magacaabaya – Yaa ka mida ? admin on
Nov 13th, 2012 //
No Comment Views 163839Galkacyo (Galmudugnews) Ila wareedyo muhiima ayaa Galmudugnews u sheegay in Madaxweynaha cusub ee Galmudug State Dr Mohamud Abdi Tima kalajeex golahiisa Wasiiradda magacaabayo maalinta berri oo ah (Arbaco) saacadu markey tahay 10–ka subaxnimo.
Liiska Golaha Wasiiradda cusub ee Galmudug ayaa la xaqiijiyay inay ka mid yihiin dad caana oo miisaan culus leh.waxaana ka mida ,Cabdi Salaad Yaroow,Ayaan Saciid Cilmi,Cadde Cali Gurey,Mahad Mohamed Farah.
Tima kalajeex ayaa siyaasadda Galmudug wuxuu uga adkaaday Cabdi Qaybdiid kadib markii uu wax walba wado sharciya u maray.
Waxyaabaha Qaybdiid fashiliyay waxaa ugu weyn isagoo Gole Wasiiro magacaabay isagoon xilkii Madaxweynenimada u gelin tartan xora,sidoo kalena kala wareegin Madaxweynahii xilka hayay ee Mohamed Ahmed Caalin.
Tima kalajeex ayaa markii la doortay wuxuu si degan u raadiyay Madaxweynahii magacaabay gudiggii doorashada ,wuxuuna sedex bil kadib ku guuleeystay inuu hab maamuus heer Qaran kula wareego xilka Madaxweynenimada.
Cabdi Qaybdiid oo si seefla boodnimo ah u magacaabay gole wasiiro ayaa markii dambe lacag dhan laba boqol ,oo kun oo dollar ku raadshay inuu Caalin siiyo si xilka uu ugu wareejiyo balse Korneyl Mohamed Ahmed Caalin ayaa laalay inuu qadiyadiisa Dastuuriga ku bedesho lacag laaluusha.
Beesha Caalamka ayaa hore u shaacisay inay taageereyso oo kaliya qofka uu Madaxweyne Caalin ku wareejiyo xilka.
Madaxweynaha cusub ee Galmudug State Dr Mohamud wuxuu beesha Caalamka la leeyahay xiriir qoto dheer isagoo ula macaamilo hab sharciyeedka Caalamka (International Standard) halka Qaybdiid uu ku fashilmay hab dhaqankiisa Mooryameynta ama Jabhadnimada.
Nin ka mida ragga Galmudug la soo shaqeeyay oo lagu magacaabo Mohamed Cali Nur ayaa la sheegay inuu Cabdi Qaybdiid lacag ka qaatay si uu beesha Caalamka ula macaamilo laakiin taasi waxay noqotay mid uu weji gabax kala kulmo.
Galmudugnews.com waxay bilaabeeysaa Qormo joogta noqon doonto looguna magacdaray “ Aqoonyahankii adeegaha u noqday dagaal ooge” .
Qormadaan waxaan ku soo bandhigi doonaa Shirkii ugu dambeeyay ee Mohamed Cali Nuur ugu waramay qaar ka mida Jaaliyadda Galmudug guriga Shukri Jamac Nur Saalax ee Magaaladda London.
Cod si sira looga duubay hadalkiisa oo dhameeystiran.
Codad si sira looga duubay tan iyo markii uu Siyaasadda Galmudug ku biiray.
Arrimahaan oo dhan waxaan uga dan leenahay in qof walba Garwaaqsado xaqiiqada .
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21018 hitsContact US - 19679 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15778 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 15373 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13954 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13901 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13823 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 13633 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11812 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11794 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11741 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11534 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11508 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11365 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11233 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11172 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11065 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11064 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10829 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 10454 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10359 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10334 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 10025 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 10018 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9792 hits Home About